Bit By Bit - Ukuqaphela ukuziphatha - 2.4.1.2 Friendship kumiswa kubafundi
Abacwaningi esetshenziswa izingodo imeyili kanye namarekhodi zokuphatha ukuze baqonde ubungane ekwakhekeni. Lolu cwaningo kudinga esebenzelana nabaseBhabhiloni incompleteness idatha big.
Ezimweni eziningi, abacwaningi awekho lucky ngokwanele ukuba babe konke ezikufunayo eqoqwe ngokuzenzakalelayo endaweni eyodwa. Izinkinga ababili common selwazi ngabantu kanye nokungahambisani phakathi kwaqanjwa theory kanye nedatha. Zombili lezi zinkinga ayebhekiswe by Kossinets futhi Watts (2009) njengengxenye yemizamo yabo, ukuze baqonde ukuthi social networks ziphenduke.
ukukhuluma Cishe, abacwaningi bacabanga ukuthi ingosi yokuxhumana nabantu kwemvelo eliqhutshwa izici ezintathu: 1) isakhiwo of ubudlelwano ezikhona 2) imisebenzi ehlanganyelwe (isib, dorms, amakilasi) kanye 3) nobuhlanga. Ukuqonda budlelwane emkhatsini lezi zici ezintathu kudinga idatha inethiwekhi longitudinal kuhlangene ulwazi mayelana emininingwaneni yabantu ngabanye 'kanye nemisebenzi. izifundo Ngasekuqaleni kwadingeka ezinye zalezi zici, kodwa akekho ayenakho kokuthathu.
Kossinets futhi Watts Saqala ucwaningo lwabo by ekuzuzeni izingodo imeyili kusuka enyuvesi enkulu. Nokho, lezi izingodo imeyili yedwa ngamashumi akuphelele, abazi zihlanganisa konke okudingekayo ukuze siqonde izinto ezihlukahlukene ukushayela inethiwekhi yokuziphendukela kwemvelo. Ngakho, Kossinets futhi Watts ahlanganisiwe zalezi zikhuni imeyili, neminye imithombo yokwaziswa emibili: nolwazi lokubala ubuningi babantu letigcogcwe eyunivesithi kanye nokwaziswa okuphathelene nemisebenzi okwabelwana (isib, ulwazi umfundi yokuhlala uhlu oluphelele sokubhalisa izifundo). Kanye nalezi imithombo emithathu yolwazi, ngayinye yaba lwalungaphelele, aye ahlanganiswa namanye ndawonye Kossinets futhi Watts kwadingeka idatha isakhiwo elinamandla ukuqonda inethiwekhi yokuziphendukela kwemvelo.
Kodwa, kwakunendawo eyodwa inselele sokugcina ukuthi kwadingeka banqobe. Kossinets futhi Watts babefuna ukutadisha indlela yokuxhumana kule nyuvesi savela ngakho kwakudingeka indlela ukusebenzisa izingodo imeyili ku ukulinganisa owayebizwa exhunywe kwi ngubani ngaleso sikhathi. Njengoba kushiwo ngaphambili (Isigaba 2.3.2.1), lolu hlobo nokusebenza kwe kwaqanjwa theory kuyinselele enkulu uma usebenzisa iminonjana digital ucwaningo social. Ekugcineni, Kossinets futhi Watts wanquma ukuthi abantu ababili babebhekwa njengabangakufanelekeli exhunywe ngesikhathi \_ (t \_) kuphela uma sebetholile ababekuqondile sike sibenane yini ama-imeyili (\_ (i \_) imeyilwa \_ (j \_) kanye \_ (j \_) imeyilwa \_ ( i \_)) dlule izinsuku ezingu-60. Lezi izinqumo ngaphandle kokubonisana nomkayo kwakungewona; zisekelwe Ukucabangisisa lokhu setting enokwehla, futhi Kossinets futhi Watts ihlolwe ukuthi imiphumela yawo kwakuyilawa eyizingqabavu kulezi ezimbili ezikhethiwe. Ngokuvamile, uma nokusebenza kuhilela ngokukhetha ezinye ethize cutoffs-ngithi amalanga ama-60 esikhundleni sezinsuku ezingu-30 noma ezingu-90 ngosuku-kuwumqondo omuhle ukuze uqiniseke ukuthi imiphumela yakho akuzona sensitive kule choice.
Once Kossinets futhi Watts le nkinga okubangelwa incompleteness (isib, ulahlekile imininingwane emayelana, ulahle ulwazi mayelana nomsebenzi okwabelwana, futhi ulahlekile kwaqanjwa theory), babenesifiso idatha esenza ukuba baqonde amabutho amathathu main ukuthi ungakwazi ukushayela inethiwekhi yokuziphendukela kwemvelo: 1) isakhiwo of ubudlelwano ezikhona 2) imisebenzi ehlanganyelwe (isib, dorms, amakilasi) kanye 3) nobuhlanga. Ngokuhambisana nocwaningo ngaphambili, bafumana ukuthi abantu abane emininingwaneni yabantu ezifanayo, maningi amathuba okuba ukwakha ubudlelwano. Nokho, ngokungafani izifundo ngaphambili, bafumana ukuthi lo mkhuba kwaba ngokuqinile mitigated by isakhiwo kwinethiwekhi kanye nemisebenzi okwabelwana. Ngamanye amazwi, isibonelo abacwaningi ngaphambili ayebone ngakwazi ukubona kancane wachaza by data ukuthi abacwaningi ngaphambili akazange abe. Ngakho, ngo-esebenzelana ngokuphumelelayo incompleteness kwemininingwane yabo, Kossinets futhi Watts sakwazi icacise nokuxhumana ezahlukahlukene ezahlukene drive evolutions ingosi yokuxhumana nabantu.